Raharaha andramena – Valpinson Toamasina : tranona mpandraharaha nosavain’ny zandary sy polisy nirongo fiadiana | NewsMada
Raharaha andramena – Valpinson Toamasina : tranona mpandraharaha nosavain’ny zandary sy polisy nirongo fiadiana
Par Taratra sur 24/02/2017
Nanomboka tamin’ny 11 ora sy 30 mn, hatramin’ny 6 ora hariva, omaly no nanaovan’ny andiana mpitandro filaminana (zandary sy polisy) nirongo fiadiana avy aty Antananarivo fisavana ny tranona mpandraharaha iray tao Valpinson, Toamasina. Tohin’ilay « raharaha andramena », sarona tamin’ilay sambo Lumina ihany izao.
Mitohy ny fanaovana fanadihadiana momba ny fahatrarana ilay sambo Lumina nolazaina fa nitondra andramena miisa 340 bolabola niainga avy any Mananara Avaratra ary efa nokasaina haterina any Afrika atsimo ny 11 febroary 2017 lasa teo. Omaly, tonga tao an-tokantranon’ilay mpandraharaha voarohirohy amin’ity fanondranana an-tsokotsoko ity etsy Valpinson ny mpitandro filaminana itambaran’ny zandary sy polisy avy aty an-dRenivohitra hanatanteraka fisavana trano izay niantomboka tamin’ny 11 ora sy 30 mn ary tsy nifarana izany raha tsy tamin’ny 6 ora hariva. Nahitana mpitandro filaminana mirongo fiadiana mahery vaika.
Nampihorohoroana hatramin’ny mpanao gazety…
Tsy nisy nahalala ny fahatongavan’ny mpitandro filaminana avy aty an-dRenivohitra hanatanteraka izao fisavana trano izao ny tompon’andraiki-panjakana isan-tsokajiny ao Toamasina, ny prefet, lehiben’ny faritra ary ireo lehiben’ny fitandroana ny filaminana ao an-toerana. Nilaza ho tsy mahalala na inona na inona raha nanontaniana ny Kolonely komandin’ny vondron-tobin’ny zandarimariam-pirenena raha tsy eto an-toerana kosa ny jeneraly komandin’ny faritanin’ny zandarimariam-pirenena ao Toamasina. Tsy nanaiky ny hiresaka tamin’ny mpanao gazety kosa ny jeneraly komandin’ny zandarimariam-pirenena izay nitarika ny delegasiona mafonja avy aty an-dRenivohitra.
Andanin’izay, nihorohoro ny mponina tao Valpinson manoloana ny fisian’ireto mpitandro filaminana nirongo basy mahery vaika. “Fa misy inona eto? Fa angaha misy jiolahy mahery vaika hosamborina ao Valpinson” hoy ny fokonolona nihorohoro. Tsy izay ihany fa nampihorohoroana hatramin’ny mpanao gazety mba tsy haka sary.
Tamin’ny 6 ora hariva nandritra ny fivoahan’ireo nanao ny fisavana tao an-tranon’ity mpandraharaha mpivady ity dia tazana ny fitondran’ireo mpitandro filaminana milina fanisam-bola, antontan-taratasy maro, solosaina ary malety iray.
Sary : Sajo